Kala wareega Badda Somalida.( Ha ooyin):-(Akhriso) – hareerley
May 20, 2019 bashka	0 Comments
Qoraalka intaan kama yareeyn karo, si aan u kala faa’iido darteed,Qaarna waan ka reebay!!!!!.
Maad iska fiirisiin indhaha miyaad la’dihiin, wixii hore ugu dhacay waddamada kale ee Africaanka ah, ma xumo in Caalamka heshiis lala galo, laakin waxaa bilaawday in wadamada waaweyni ey boobaan wadamada yar yar ee aan xisaabtameeyn.
2- Shiinuhu heshiiskii ey la galeen Dalka Cameroon bal fiiri, 45.000 hector oo aheyd keyn UNISCO u aqoonsatay “world heritage conservation area”,oo xayaawaanad kala duwan ey ku noolayeen ayaa Shinuhu u bedeshay dhul ey ku beertaan Dhirta laga miiro Goomaha “ Caaga”, dadkii deegaanka ayaa hadda dhibkii soo gaaray oo qeylinayo. Dalka Gambiya oo beeri Taajir ku ahaa Kaluunku hadda male Kaluun ku filan.
3- Shirkii Sept. 2018, ee “the Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation” Madaxweynaha Dalka Africaanka ah ee Madagascar waxa uu Shiinaha la saxiixday 10 Sanno oo kaluumeysi ah heshiiskaa oo dhax maray shirakada “the Malagasy Agency for Economic Development and Promotion of Enterprises”, iyo “the Chinese business consortium” Shiinuhu waxa ey ku maalgalinayaan Mashruucaa $7.2 Billion, waxaana ka jilaabanaya dalka Madagascar 330 Markab oo Shiinuhu leeyahay. dhowr bil ka hor ayaan si ku helay heshiiskaa waxaana iiga muuqatay in dhib ugu jiro shacabka Madagascar, Aragtideeyda Qofeed.
1- EEZ-ka Somaliaya waa 830,389 km2 dhinaca “Indian Ocean” oo kaliya. Waana cabir gaarayo illaa 200 Nautical miles sida ku cad sharciga Law No. 37 ee soo baxay 1972. Kacaanka oo 3 Sanno oo kaliya jiro ayaa ka gaarsiiyay, waqtiga oo dhici rabay in uu Diiwaanka Caalamka galiyo.
4- Bangiga “Exim Bank of china” heshiiskiisii uu la galay Somalia ee 22 Dec. 2018 waxa Xuquuq kaluumeysi oo aan xad leheyn uu siinayaa Shiinaha, waxaa kale oo jira in lagu heshiiyay 200 Million si dib loogu dhiso dekada Xamar laguna bedesho kaluumeysi aan xad leheyn oo faa’iido badan ey ka soo galee shiinaha iyo in ey Dekada qeyb ku lahaato Shiinuhu inta lacagteeda ey ka soo ceshanee, waana nuuc cusub oo Burcad badeed ah.
6- Sannadkii 2013 ayaa shirkad Shiina ahi balan qaaday in ey lacag la’aan ku dhisee Dekada Ceel macaan iyo Garoonka Cisaleey, waxa la sameeyay darasadii ,khubaro labada dhinac ah ayaa loo xilsaaray, naqshadihii waa la dhameeyay Qiimuhu waxa uu noqday $770 Million, kadibna wafdi somaliya ayaa tagay dalka Shiinaha, shirkadii ayaa tiri: Annagu wax Lacag ah hadda idin warsan meeyno, waana idiin dhiseeynaa, Lacagta waxaan ka deymaneynaa Bangiga “Exim Bank of China” deyntaana dib ayaad isaga bixin doontiin oo Bangiga ayaa idinkula xisaabtami doono. Wafdigii iyo wasiirkii la socday waa diideen, weyna soo noqdeen. Qaar aan ka aqiin ayaan weydiiyay, waxa eyna igu yiraahdeen heshiiska khiyaano ayaa ku jirtay, deyn intaa la egna uma soo qaadi karno jiilka dambe.
7-Sannadkii 1997 ayaa “the environmental NGO Greenpeace” waxa ey cadeeyeen in Shirkado ka socda wadamada Swiss iyo Talyaanigu ey badda somaliya ku aaseen haraaga wasaqda warshadaha iyo sun khatar ah. Haddana waxaa soo baxaya Cabsi, laga baqayo in Shiinuhu ey ku aasaan Badda somaalida ““toxic waste”. Bacdamaa Shiinuhu ey leeyihiin warshado badan lana la’yahay meel lagu shubu wasaqdaa.
8- Habkii FAO, World Bank iyo IADC ey nooga caawin lahaayen 2013..ee ahaa in aan si miisaaman, Ceymiska, sida dakhliga looga soo xareeyo, iyo farsamada “technical assistance” loogu heshiiyo “Tuna-ha”. Mashruucaa Ma laga faa’iideystay??? Taa oo weli aad ka heli kartid “updated website”. Maxaa noo diidayo in aan Ku dhaqano?
9- Habeen ayaa casho naloogu Sameeyay Magaalada “the Hague” ee Dalka “Holland” ayaan xasuustaa in Gabar Cashada nala joogtay ey tiri: Annigu Kaluunka ma cunno oo mar hore ayaan iska joojiyay, waxaan ogaaday in kaluunka yurub laga cunu uu u badan yahay Kaluun laga soo xaday Dal miskiin ah oo Somaliya la yiraa. Waxaa lagu yiri: Ninkaan ayaa Somali ah, waan xishooday.
11- waxaa la yiraa Kaluunka kalya ee u ooyo sida caruurtu waa kan loo yaqaan “Zoologger” qadarka Alle. Annigu waaba ooyee, yaa ka waramo Zoologger –kii somalida.
W/Qorey Yahya Amir
← US Fifth Fleet: GCC Countries Begin Enhanced Maritime Security Patrols
Sudanese military and opposition resume talks after street violence →